Handball eran-tany 2017 : tompondaka « indray » i Frantsa, taorian’ny 2015 | NewsMada
Handball eran-tany 2017 : tompondaka « indray » i Frantsa, taorian’ny 2015
Nandritra ny lalao fiadiana ny tompondaka eran-tany faha 25, taranja handball, natao tany Frantsa, voahosotra ho tompondaka « indray » ry zareo Frantsay, lehilahy. Lalao famaranana natao ny 29 janoary teo, resin’i Frantsa tamina elanelana isa fito, 33-26 i Norvezy. Anaram-boninahitra tompondaka eran-tany faha-6 izao azon’i Frantsa. Voalohany kosa izao i Norvezy , nahazo ny medaly volafotsy ; Slovenia, niravaka ny medaily alimo, laharana fahatelo rehefa naharesy an’i Croatie, 31-30. Naha tompondaka eran-tany an’i Frantsa, sokajy lehilahy, ny taona 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 ary izao 2016 izao.
Nanamarika ry zareo Norvezianina fa « tsy misy tokony mahamenatra ny faharesentsika. Milalao amin’ny taniny ny Frantsay tohanan’ny mpijery 16.000 mahery. Tsy mora ny fiatrehana azy ireo “, hoy ny mpilalaon’i Norvezy iray, i Christian O’Sulllivan. Tsiahivina anefa fa karazana fanarenana nataon’i Frantsa izao raha ny fahareseny tamin’ny famaranana nandritra ny Lalao Olympika farany, 2016, tany Rio, Brezila. Resin’i Danemark 28-26 i Frantsa tamin’izany.
Tsy resy mihitsy ny ekipa frantsay nandritra ny lalao rehetra tamin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany 2017 tany aminy. Niavaka kosa ny lalao famaranana, mipetraka ho tantara, tompondaka eran-tany nifanesy, 2015-2017. Tsy zakany ny naharesy tany Rio iny, nandritra ny Lalao Olympika 2016 iny, hoy ireo mpanaraka akaiky ity taranja ity.
Filaharana, 10 voalohany amin’ireo ekipa 24 nandray anjara : France, Norvège, Slovénie, Croatie, Espagne, Suède, Hongrie, Qatar, Allemagne, Danemark.